Umatshini wokuPakisha weFektri | Kwichina Abavelisi boMatshini bokuPakisha kunye nabaXhasi
Umatshini wokuPakisha wePowder ngokuzenzekelayo china manufacturer
Lo matshini ugqibezela yonke inkqubo yokupakisha yokulinganisa, ukulayisha izinto, ukuxhoma, ukushicilela komhla, ukutshaja (ukukhathala) kunye neemveliso ezithutha ngokuzenzekelayo kunye nokubala. inokusetyenziswa kumgubo kunye nezinto ezinamatye. Njengobisi olungumgubo, ialbham powder, isiselo esiqinileyo, iswekile emhlophe, i-dextrose, umgubo wekofu, umgubo wesondlo, ukutya okutyetyisiweyo njalo njalo.
Imodeli yeeNdawo eziPakishwayo zokuPakisha ze-Lane: SPML-240F
Lo matshini ugqibezela yonke inkqubo yokupakisha yokulinganisa, ukulayisha izinto, ukuxhoma, ukushicilela komhla, ukutshaja (ukukhathala) kunye neemveliso ezithutha ngokuzenzekelayo kunye nokubala. inokusetyenziswa kumgubo kunye nezinto ezinamatye. Njengobisi olungumgubo, ialbhamen powder, isiselo esiqinileyo, iswekile emhlophe, i-dextrose, umgubo wekofu, njalo njalo.
Oluzenzekelayo Ukupakisha Machine Ukupakisha Model SPE-WB25K
Umatshini wokupakisha ngokuzenzekelayo unokuqonda umlinganiso ozenzekelayo, ukulayishwa kweebhegi ezizenzekelayo, ukugcwaliswa okuzenzekelayo, ukutywina ubushushu ngokuzenzekelayo, ukuthunga kunye nokusonga, ngaphandle kokusebenza ngesandla. Gcina izibonelelo zabasebenzi kwaye unciphise iindleko zexesha elide. Inokugqibezela umgca wemveliso yonke kunye nezinye izixhobo ezixhasayo. Isetyenziswa ikakhulu kwimveliso yezolimo, ukutya, ukutya, ishishini leekhemikhali, ezinje ngombona, iimbewu, umgubo, iswekile kunye nezinye izinto ezinamanzi amahle.
I-Rotary eyenziwe kwangaphambili ye-Bag Packaging Machine Model SPRP-240P
Lo matshini ngumzekelo weklasikhi wokutya okupakishwayo okuzenzekelayo, unokuzimela ngokuzimeleyo kwimisebenzi njengokupakisha ibhegi, ukushicilela komhla, ukuvulwa komlomo wengxowa, ukuzaliswa, ukuxinana, ukutywina ubushushu, ukubumba kunye nokukhutshwa kweemveliso ezigqityiweyo, njl. izinto, ibhegi yokupakisha ineendawo ezininzi zokuziqhelanisa, ukusebenza kwayo kuyathandeka, kulula kwaye kulula, isantya sayo kulula ukuyilungisa, imigaqo yengxowa yokupakisha inokutshintshwa ngokukhawuleza, kwaye ixhotyiswe ngemisebenzi yokufumanisa okuzenzekelayo kunye nokujonga ukhuseleko, ineziphumo ezibalaseleyo kuzo zombini ukunciphisa ukulahleka kwezinto zokupakisha kunye nokuqinisekisa ukusebenza kokutywina kunye nembonakalo egqibeleleyo. Umatshini opheleleyo wenziwe ngentsimbi engenasici, eqinisekisa ucoceko kunye nokhuseleko.
Zenzekelayo Ubunzima & Packaging Machine Model SP-WH25K
Ukupakisha okuzenzekelayo okuzinzileyo kolu ngcelele kubandakanya ukondla ngaphakathi, ubunzima, umoya womoya, ukubopha ingxowa, ukususa uthuli, ukulawula ngombane njl. Le nkqubo ihlala isetyenziswa ngesantya esiphezulu, rhoqo epokothweni evulekileyo njl njl njl njl njl. izinto.
Oluzenzekelayo Packaging Machine Model SPLP-7300GY / GZ / 1100GY
Eli candelo lenzelwe isidingo semitha kunye nokuzaliswa kwemithombo yeendaba ephezulu. Ixhotyiswe ngempompo ye-servo yereyitha yokulinganisa izinto kunye nokusebenza kwezinto zokuphakamisa izinto ezizenzekelayo kunye nokondla, ukubala okuzenzekelayo kunye nokuzalisa kunye nokwenza iibhegi ngokuzenzekelayo kunye nokupakisha, kwaye ikwanokuxhotyiswa ngememori yemisebenzi yeenkcukacha zemveliso eziyi-100, iswitschover sobunzima inokufezekiswa ngokubetha okukodwa.
Oluzenzekelayo Potato Chips Packaging Machine SPGP-5000D / 5000B / 7300B / 1100
Ukupakisha i-cornflakes, ukupakishwa kweelekese, ukupakishwa kokutya okukhukhumeleyo, ukupakishwa kweetshipsi, ukupakishwa kweenut, ukupakishwa kwembewu, ukupakishwa kwerayisi, ukupakishwa kweembotyi zokupakisha ukutya komntwana kunye nokunye okunjalo kufanelekile kwizinto ezaphukileyo ngokulula.
Icandelo line-SPGP7300 umatshini wokugcwalisa ngokuthe nkqo, umlinganiso wokudibanisa (okanye umatshini we-SPFB2000 onobunzima) kunye nesinyusi sebhakethi emi nkqo, idibanisa imisebenzi yokulinganisa, ukwenza ibhegi, ukusonga ngomphetho, ukuzalisa, ukutywina, ukushicilela, ukubetha nokubala, ukwamkela I-servo motor eqhutywa ngamabhanti exesha lokutsala ifilimu. Onke amacandelo olawulo amkela iimveliso zebranti eyaziwayo yamanye amazwe ngokusebenza okuthembekileyo. Zombini iindlela zokutywina ezinqamlezileyo kunye nobude bamkela inkqubo yomoya ngesenzo esizinzileyo nesithembekileyo. Uyilo oluphambili luqinisekisa ukuba uhlengahlengiso, ukusebenza kunye nokugcinwa kwalo matshini kulunge kakhulu.
I-Rotary eyenziwe kwangaphambili ye-Bag Packaging Machine Model SPRP-240C
Zenzekelayo Umqamelo Packaging Machine
Ifanelekile: ukuhamba kwepakethi okanye ukupakisha umqamelo, njengokupakisha ii-noodles, ukupakisha ibhiskithi, ukupakisha ukutya kolwandle, ukupakisha isonka, ukupakisha iziqhamo njl.